कति ठूलो मन पुर्ब युवराज पारस शाहको! नेपाली झण्डा र राहत बोकेर दुखि पिडितको घर घरमा पुगे (मन रुवाउने भिडियो) - Enepalese.com
कति ठूलो मन पुर्ब युवराज पारस शाहको! नेपाली झण्डा र राहत बोकेर दुखि पिडितको घर घरमा पुगे (मन रुवाउने भिडियो)
इनेप्लिज २०७७ जेठ ७ गते २२:१२ मा प्रकाशित
पुर्ब युवराज पारसले पोखरा १८ पामेका जलहारी समुदाए लाइ राहत बितरण गरेका छन् । करिब ४५ भन्दै बढी परिवार हरुलाई आफ्नै खर्च बाट राहत बितरण गरेका हुन्। कोरोना को कहर र लक् डाउन को समयस्या ले जलधारी समुदाए मा खाधाना को अभाब भएको खबर पारस सम्म पुगे पछि उनि राहत बोकेर पोखरा पुगेका हुन्। जलधारी समुदाए लक्डाउन को प्रभाब ले उनि हरु माछा मार्न नपाएको र आफ्नो दैनिकी चलाउन गार्हो भए पछि यस ठाउमा पुर्ब युबराज पुगेको खबर आएको छ।
लक्डाउन भएको करिब ५० दिन सम्म पुगी सक्दा अति बिपन्न परिवार लाइ राहत वितरण गर्न पुर्ब युराज पुगेको र यस बाट ठुलो सहयोग पुगेको जालहारी समुदाय बताउछन । पुर्ब युवराज यस समुदाय कि ज्येस्ठ नागरिक ८४ बर्षिय रत्न माया जालहारी लाइ राहतहस्तानतरण गर्दै राहत बित्ररण गरेका थिय । उक्त राहत बित्ररण कार्यकर्ममा प्राथिमिकता का साथ् ज्येस्ठ नागरिक र असाय हरुलाई राहत बितरण गरिएको थियो । यस संकट काल को समय मा गरिब पिडित हरुको चुलो बाल्न र कोइ पनि भोको पेट न रहोस भन्ने हेतु ले पुर्ब युबराज पारस साह को सहयोग अगाडी बढेको उनका सहयोगी साथि हरुले जानकारी गराएको थिए ।
जालहारी समुदाएका ज्येस्ठ नागिरक हरुले राहत बितरण गरेको उपलक्ष्यमा पुर्ब युबराज को दिर्घ आयुको कामना गरेका समेत थिय । उनीहरु को यस राहत सहयोग लाइ एकदमै माया गर्दै यस देश मा राज संथाको कमिको महशुस गरेका थिए ।